Sababta gudaha RDKongo:
Cid kasta oo ku lug leh siyaasada waxaa la yiraahdaa "Amiiraddeeda"? Muxuu mudan yahay cinwaanka "heerkiisa ugu sarreeya" Xitaa haddii mid yahay xirfad barasho xirfadeed ??
Dhamaan Fannaaniinta heesaha leh waxaa loogu yeeraa "Hogaamiye, Madaxweyne" ?? (madaxweyne laxiriirta waxa ama maxay ??).
Dhamaan ciyaartooyda, wax kasta oo edbinta ah, waxaa loogu yeeraa "Master". Sababta guud ahaan eccentric ??
Dhamaan ganacsatada waxaa loogu yeeraa "Wadaadka Sare, Maamulaha, Maamulaha". Maxaa oo dhan maxaa ??
Waa maxay ujeeddada ku kicineysa dadka reer Congo inay ku qarxiyaan dadka magacyadooda oo dhan? Ma loo baahan yahay in qof haysto ama u qalmo dhammaan magacyada ama magacyada loo yaqaan '??
Sep29 10: 05